Shipping - Shenzhen King Fu Color Daabacaadda Co., Ltd
Waayo, maraakiibta buugaagta badda ka Shenzhen, fadlan u ogolaan lacagta soo socda waqti shiraaca, kastamka, iyo dhaamin gudaha si aad bakhaarka.
US Si / dalal Kanada: 3 ilaa 6 toddobaad ku xiran galbeed (LA, Vancouver) ama kharashka bari (York, Toronto)
Si dalal Asia: 1 ilaa 2 todobaad
Si UK iyo dalal Yurub: 4 ilaa 6 todobaad
si ay u dalal Australia: 2 in 3 todobaad
si dalalka Africa: 4 ilaa 8 toddobaad
si dalal South America: 5 ilaa 7 toddobaad
Waxaan ku siin karnaa fursado dhowr ah maraakiibta uu ka soo xusho: Ex-shuqullada, FOB Shenzhen, Dekadda Destination CIF, Door in ay Door Delivery iyo Air Freight.
Macaamiisha qaadaaya at our warshad, iyo diyaarin wax walba oo ka soo Shiinaha in ay dalkooda dhex wakiilada iyaga u gaar ah.
FOB Shenzhen (Free on Board)
shixnado waxa loo dhiibaa dekedda ee Shenzhen loogu talagalay macaamiisha u samaysato balamo maraakiibta u gaar ah, kastamka, iyo gaarsiinta gudaha ay.
Port CIF (Kharashka, Caymiska & Freight)
Waxaan kuu diyaarin in markab shixnado caymis in dekedda loo qoondeeyey ee laga soo galo. Macaamiisha diyaarin kastamka iyo gaarsiinta gudaha wakiilada iyaga u gaar ah.
Door in Delivery Door
Waxaan diyaarin in Markab shixnado caymis albaab-ilaa-albaab ka Shenzhen si ay u socdeenna final. Adeegga waxaa ka mid ah caadooyinka ansixin iyo gaarsiinta gudaha. Waajibaadka iyo cashuur dheeraad ah. Books geeyey galay Maraykanka aadan haysan waajibaadka.
Books loo soo diri karaa by xamuulka hawada, laakiin la soco in tani waa fursad qaali ah. Xamuulka Air qaadan kartaa ilaa 1 toddobaad ama ka badan si ay u bixiyaan. Dilaaliinta maraakiibta isticmaali xamuulka xamuulka diyaaradaha ganacsiga, taas oo macnaheedu yahay in buugaagta la qabanayaa la socday diyaarad ganacsi, iyo buugaag ah waa la samatabbixin doonaa by gaari degaanka ka raaceyso gegada diyaaradaha ilaa finalka.
Sida ugu dhaqsaha badan in ay buugaag ka samatabbixiyey waa in ay isticmaalaan xogo hawada, sida oogeen, UPS ama FedEx. Tani waa mid aad u qaali ah oo waa in la isticmaalaa oo kaliya baahida degdegga ah.